အသတ်ခံရသူရဲ့ဝိဉာဉ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံချောက်လန့်မှုကြောင့် (၅ ) လနီးပါးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဆေးမှင်ကြောင်နဲ့မိန်းခလေးတစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုရှာဖွေတူးဖော်တွေ့ရှိ - VPS - MCKZONE
အသတ်ခံရသူရဲ့ဝိဉာဉ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံချောက်လန့်မှုကြောင့် (၅ ) လနီးပါးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဆေးမှင်ကြောင်နဲ့မိန်းခလေးတစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုရှာဖွေတူးဖော်တွေ့ရှိ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ကောက်မြို့ ဘန်ခဲမြို့နယ် ၊ ဖက်ကဆဲမ် ၄၇ လမ်းက အိမ်အမှတ် (၅၈) တွင်နေထိုင်သူ ဈေးပိုင်ရှင်ဟောင်းရဲ့သားဖြစ်သူခြံဝင်းထဲကို အမှတ် (၂၆) အထူးရဲတပ်ဖွဲ့မှအင်အား ၁၄ ဦးဟာ ဝင်ရောက်ဝိုင်းရံပြီး အသက် (၄၁) နှစ်အရွယ် နိုင်အဖိချိုင်း ( ခ) အိုက်စ်ကို လူသတ်အလောင်းဖျောက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်..
ဖြစ်ပုံကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လလယ်ကတည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ စကွန်နခွန်ပြည်နယ်က အသက် (၂၂) အရွယ် နောင့်ကစ် ( Kit ) ဆိုတဲ့မိန်းခ​လေးတစ်ဦးအိမ်ပြန်မလာဘဲ (၅) လအကြာပျောက်ဆုံးနေပြီး ဘာမက်ဆေ့ခ်ျမှမရသည့်အတွက် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဆွေမျိုးများရဲ့သတင်းပေးချက်အရ ” Kit ” ဟာ Aphichai နဲ့အတူနောက်ဆုံးနေထိုင်နေရင်းရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ Aphichai ရဲ့နေအိမ်နဲ့ခြံအကျယ် (၁၀)ခန့်ကိုစီးနင်းဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ တရားခံ၏နေအိမ်တွင် အိုက်စ်မူးယစ်ဆေး အထုပ်ငယ် ၂ အိပ် ၊ ၉ မမပစ္စတိုသေနတ် (၁)လက် ၊ ၎င်းကျည် ၁၅ တောင့်နှင့် ဂက်စ်အိုးတွေကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားကာ ခုခံရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ဦးမှုရခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ၎င်းအား ” Kit ” ကိုဘာ့ကြောင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သလဲလို့မေးမြန်းစဉ် Kit နှင့် Fb မှခင်မင်ရင်းနှီးရာမှအိမ်ပိုခေါ်ပြီးအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ၊ တစ်ရက်မှာ သူ့အနားမှာမနေလိုတော့ကြောင်းပြောရာမှစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် အဖိချိုင်းကရိုက်နှက်ထုထောင်းကာ သံသေတ္တာ ထဲထည့်ကာ ချုပ်နှောင်ထားခဲ့ရင်း မတော်တဆသေဆုံးသွားတာပါလို့ရဲတွေကိုဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်
သေသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြေမမြှုပ်ရဲလို့လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) နှစ်ခန့်က ထောင်ထဲမှာခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Chalong Chon ကိုသရက်ခြံထဲမှ အနက် ၃ပေခန့်တူးခိုင်းကာမြေမြှုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်..ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမြေမြှုပ်ထားသည့်နေရာအားတူးဆွစဉ် အိပ်အမဲနှင့်ထုပ်ထားသည့် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ပုတ်နေသောအမျိုးသမီးအလောင်းကိုတူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီး
ဆေးမှင်ကြောင်တွေမှာကျန်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဆွေမျိူးအသိုင်းအဝိုင်းက Kit ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ် ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ DNA စစ်ဆေးပြီးမှအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ။မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုဖြင့်ရဲစခန်းတွင်အမှုစစ်ဆေးခံရသူ အဖိချိုင်ူနှင့်အတူနေသူသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Chalong Chon သည် အလိုလိုထိတ်လန့်ချောက်ခြားနေပြီး ရဲများကိုသူ၏နောက်သို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ဝိဉာဉ် ဟာအမြဲလိုလိုလိုက်နေပြီး အဲ့ဒီမိန်းခလေးအလောင်းကိုသူကိုယ်တိုင် ကူညီပြီးမြှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုပါတယ်.
အစကတော့ရဲများကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး ၊ ပြောပါများလာ၍အခင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့သူ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်ရှာဖွေတူးဖော်ရာမှအမှုမှန်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။အဖိချိုင်းဟာမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအမြဲလိုသုံးစွဲတတ်ပြီး Call Girl တွေထံသွားရောက်လည်ပတ်ပြီး သူ၏နေအိမ်သို့ အမြဲတမ်းခေါ်လာလေ့ရှိပြီး မိန်းခလေးများကို လက်ထိပ်ခတ်ခြင်း ၊ ရိုက်နှက်ခြင်း ၊ ချုပ်နှောင်ထားခြင်းအပြုအမူမျိုးဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကိုခုံမင်သူဟုသူ၏သူငယ်ချင်းများ၏ပြောပြချက်အရသိရပါတယ် ။
ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝကတည်းက ကျောင်းကို သေနတ်ယူဆောင်လာလေ့ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ သူ၏ဖခင်မှာလည်းဇနီး၏စေခိုင်းချက်အရ အသက်မပြည့်သူ ၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးတစ်ဦးကိုယခုကဲ့သို့သံလှောင်ချိုင်အချုပ်ခန်းထဲတွင်ချုပ်နှောင်နှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုဖြင့်ထောင်ကျခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါသည် ။
အဖိချိုင်းဟာကျယ်ဝန်းတဲ့ခြံကျယ်ကြီးထဲမှာတစ်ဦးတည်းနေထိုင်ပြီး ခြံထဲမှာဂိုဒေါင် ကြီး ၅ လုံးရှိပါတယ် ၊ CCTV အပြည့်တပ်ဆင်ထားပါတယ် ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) နှစ်ခန့်က တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဖြင့်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
​အသတ်ခံရသူအမျိုးသမီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအရ Side Line တွင် ငွေကြေးရှာဖွေသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းထိုင်းသတင်းများမှာဖော်ပြထားပါတယ် ၊Side Line ကတော့ Line Group တွင်ယာယီအပျော်ယာယီမယားအဖြစ် ပုရိသတွေဆက်သွယ်ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်.
လောလောဆယ်မှာတရားခံကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အတွက် ရပ်ကွက်ထဲကအိမ်နီးနားခြင်းတွေက ဒီလိုငွေကြေးအရှိန်အဝါဂုဏ်မောက်ပြီး လူတကာကို စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို နိုင့်ထက်စီးနင်းအနိုင်ကျင့်လေ့ရှိသော အဖိချိုင်းကို ထောင်ထဲမှာဘဲသေတဲ့အထိချုပ်နှောင်ထားပေးရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့သတင်းထောက်တွေကတဆင့်ပြောကြားသံတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်…
Credit to #စည်သူမောင်
ကိုးကား ( https://youtu.be/jGPqiQ7fy_Y )
အသတျခံရသူရဲ့ဝိဉာဉျကိုယျတိုငျလိုကျလံခြောကျလနျ့မှုကွောငျ့ (၅ ) လနီးပါးပြောကျဆုံးနတေဲ့ ဆေးမှငျကွောငျနဲ့မိနျးခလေးတဈဦးရဲ့အလောငျးကိုရှာဖှတေူးဖျောတှရှေိ့
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ ရကျ
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလ (၉) ရကျနကေ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာဘနျကောကျမွို့ ဘနျခဲမွို့နယျ ၊ ဖကျကဆဲမျ ၄၇ လမျးက အိမျအမှတျ (၅၈) တှငျနထေိုငျသူ ဈေးပိုငျရှငျဟောငျးရဲ့သားဖွဈသူခွံဝငျးထဲကို အမှတျ (၂၆) အထူးရဲတပျဖှဲ့မှအငျအား ၁၄ ဦးဟာ ဝငျရောကျဝိုငျးရံပွီး အသကျ (၄၁) နှဈအရှယျ နိုငျအဖိခြိုငျး ( ခ) အိုကျဈကို လူသတျအလောငျးဖြောကျမှုနဲ့ဖမျးဆီးလိုကျတယျဆိုတဲ့သတငျးဖတျလိုကျရတယျ..
ဖွဈပုံကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဇူလိုငျလလယျကတညျးပြောကျဆုံးနတေဲ့ စကှနျနခှနျပွညျနယျက အသကျ (၂၂) အရှယျ နောငျ့ကဈ ( Kit ) ဆိုတဲ့မိနျးခလေးတဈဦးအိမျပွနျမလာဘဲ (၅) လအကွာပြောကျဆုံးနပွေီး ဘာမကျဆခြေျ့မှမရသညျ့အတှကျ ဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးကရဲစခနျးမှာအမှုဖှငျ့အကွောငျးကွားခဲ့ပါတယျ ။
ဆှမြေိုးမြားရဲ့သတငျးပေးခကျြအရ ” Kit ” ဟာ Aphichai နဲ့အတူနောကျဆုံးနထေိုငျနရေငျးရုတျတရကျပြောကျဆုံးသှားခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့မှ Aphichai ရဲ့နအေိမျနဲ့ခွံအကယျြ (၁၀)ခနျ့ကိုစီးနငျးဝငျရောကျလိုကျတာနဲ့ တရားခံ၏နအေိမျတှငျ အိုကျဈမူးယဈဆေး အထုပျငယျ ၂ အိပျ ၊ ၉ မမပစ်စတိုသနေတျ (၁)လကျ ၊ ၎င်းငျးကညျြ ၁၅ တောငျ့နှငျ့ ဂကျဈအိုးတှကေိုအဆငျသငျ့ပွုလုပျထားကာ ခုခံရနျအတှကျကွိုတငျပွငျဆငျထားတာကိုတှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ ၊ ရဲတပျဖှဲ့ကလကျဦးမှုရခဲ့ပွီးဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ ၎င်းငျးအား ” Kit ” ကိုဘာ့ကွောငျ့သတျဖွတျခဲ့သလဲလို့မေးမွနျးစဉျ Kit နှငျ့ Fb မှခငျမငျရငျးနှီးရာမှအိမျပိုချေါပွီးအတူတကှနထေိုငျခဲ့ပါတယျ ၊ တဈရကျမှာ သူ့အနားမှာမနလေိုတော့ကွောငျးပွောရာမှစကားမြားရနျဖွဈခဲ့သဖွငျ့ အဖိခြိုငျးကရိုကျနှကျထုထောငျးကာ သံသတ်ေတာ ထဲထညျ့ကာ ခြုပျနှောငျထားခဲ့ရငျး မတျောတဆသဆေုံးသှားတာပါလို့ရဲတှကေိုဖွောငျ့ခကျြပေးခဲ့ပါတယျ
သသှေားပွီးတဲ့နောကျပိုငျး မွမေမွှုပျရဲလို့လှနျခဲ့တဲ့ (၇) နှဈခနျ့က ထောငျထဲမှာခငျမငျရငျးနှီးခဲ့တဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ Chalong Chon ကိုသရကျခွံထဲမှ အနကျ ၃ပခေနျ့တူးခိုငျးကာမွမွှေုပျခိုငျးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ..ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားကမွမွှေုပျထားသညျ့နရောအားတူးဆှစဉျ အိပျအမဲနှငျ့ထုပျထားသညျ့ ရုပျပကျြဆငျးပကျြပုတျနသေောအမြိုးသမီးအလောငျးကိုတူးဖျောရရှိခဲ့ပွီး
ဆေးမှငျကွောငျတှမှောကနျြရှိနခွေငျးကွောငျ့ ဆှမြေိူးအသိုငျးအဝိုငျးက Kit ဖွဈကွောငျးအတညျပွုခဲ့ကွပါတယျ ၊ ရဲတပျဖှဲ့ကတော့ DNA စဈဆေးပွီးမှအတညျပွုသှားမှာဖွဈတယျလို့လညျးသိရပါတယျ ။မူးယဈဆေးသုံးစှဲမှုဖွငျ့ရဲစခနျးတှငျအမှုစဈဆေးခံရသူ အဖိခြိုငျူနှငျ့အတူနသေူသူငယျခငျြးဖွဈသူ Chalong Chon သညျ အလိုလိုထိတျလနျ့ခြောကျခွားနပွေီး ရဲမြားကိုသူ၏နောကျသို့အမြိုးသမီးတဈဦးရဲ့ဝိဉာဉျ ဟာအမွဲလိုလိုလိုကျနပွေီး အဲ့ဒီမိနျးခလေးအလောငျးကိုသူကိုယျတိုငျ ကူညီပွီးမွှုပျပေးခဲ့တယျလို့ထှကျဆိုပါတယျ.
အစကတော့ရဲမြားကမယုံကွညျခဲ့ပါဘူး ၊ ပွောပါမြားလာ၍အခငျဖွဈပှားတဲ့နရောနဲ့သူ၏သူငယျခငျြးဖွဈသူနအေိမျကိုရဲတပျဖှဲ့မှဝငျရောကျရှာဖှတေူးဖျောရာမှအမှုမှနျပျေါခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ ။အဖိခြိုငျးဟာမူးယဈဆေးဝါးကိုအမွဲလိုသုံးစှဲတတျပွီး Call Girl တှထေံသှားရောကျလညျပတျပွီး သူ၏နအေိမျသို့ အမွဲတမျးချေါလာလရှေိ့ပွီး မိနျးခလေးမြားကို လကျထိပျခတျခွငျး ၊ ရိုကျနှကျခွငျး ၊ ခြုပျနှောငျထားခွငျးအပွုအမူမြိုးဖွငျ့လိငျပိုငျးဆိုငျရာပြျောရှငျကနြေပျမှုကိုခုံမငျသူဟုသူ၏သူငယျခငျြးမြား၏ပွောပွခကျြအရသိရပါတယျ ။
ငယျစဉျကြောငျးသားဘဝကတညျးက ကြောငျးကို သနေတျယူဆောငျလာလရှေိ့ခဲ့ဖူးတယျလို့ဆိုပါတယျ ၊ သူ၏ဖခငျမှာလညျးဇနီး၏စခေိုငျးခကျြအရ အသကျမပွညျ့သူ ၁၅ နှဈအရှယျ မိနျးခလေးတဈဦးကိုယခုကဲ့သို့သံလှောငျခြိုငျအခြုပျခနျးထဲတှငျခြုပျနှောငျနှိပျစကျပွီး သတျဖွတျခဲ့မှုဖွငျ့ထောငျကခြဲ့ဖူးသူဖွဈပါသညျ ။
အဖိခြိုငျးဟာကယျြဝနျးတဲ့ခွံကယျြကွီးထဲမှာတဈဦးတညျးနထေိုငျပွီး ခွံထဲမှာဂိုဒေါငျ ကွီး ၅ လုံးရှိပါတယျ ၊ CCTV အပွညျ့တပျဆငျထားပါတယျ ၊ လှနျခဲ့တဲ့ (၇) နှဈခနျ့က တရားမဝငျလကျနကျကိုငျဆောငျမှုနှငျ့မူးယဈဆေးသုံးစှဲခွငျးကွောငျ့ထောငျကခြဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ လှတျငွိမျးခမျြးသာဖွငျ့လှတျမွောကျလာခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
အသတျခံရသူအမြိုးသမီးဟာ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့မကျြမှောကျခတျေကာလအရ Side Line တှငျ ငှကွေေးရှာဖှသေူတဈဦးဖွဈကွောငျးထိုငျးသတငျးမြားမှာဖျောပွထားပါတယျ ၊Side Line ကတော့ Line Group တှငျယာယီအပြျောယာယီမယားအဖွဈ ပုရိသတှဆေကျသှယျချေါယူနိုငျတဲ့ သဘောမြိုးဖွဈပါတယျ.
လောလောဆယျမှာတရားခံကိုဖမျးဆီးရမိတဲ့အတှကျ ရပျကှကျထဲကအိမျနီးနားခွငျးတှကေ ဒီလိုငှကွေေးအရှိနျအဝါဂုဏျမောကျပွီး လူတကာကို စိတျမထငျရငျ မထငျသလို နိုငျ့ထကျစီးနငျးအနိုငျကငျြ့လရှေိ့သော အဖိခြိုငျးကို ထောငျထဲမှာဘဲသတေဲ့အထိခြုပျနှောငျထားပေးရငျသိပျကောငျးမှာဘဲလို့သတငျးထောကျတှကေတဆငျ့ပွောကွားသံတှလေညျးရှိနကွေပါတယျ…
Credit to #စညျသူမောငျ